Rajaonarimampianina:“MILA IAINANA NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA” -
AccueilRaharaham-pirenenaRajaonarimampianina:“MILA IAINANA NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA”
Nolanian’ny solombavambahoaka ny fiandohan’ny herinandro teo ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena. Nanome ny heviny mahakasika izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, omaly tany Toliara rehefa nanontanian’ny mpanao gazety momba izany. Araka ny fanambarany dia tombontsoan’ny rehetra ity lalàna vaovao ity, indrindra resy lahatra fa iaina ny fihavanam-pirenena ny rehetra. “Imbetsaka no nilaza, ary efa nanomboka tamin’ny fampielezan-kevitra nilatsaka ho fidiana ho Filohan’i Madagasikara, eny hatramin’ny nahatafapetraka ho Filoha dia nilaza foana fa be loatra ny ratra samihafa izay misy eto amin’ny firenena ka miteraka elanelana eo amin’ny vahoaka, eo amin’ny ara-tsosialy, eo amin’ny lafin’ny fanabeazana, eo amin’ny lafiny harena, eo amin’ny faritra maro samihafa ka tsy maintsy ao anatin’ny fandinihana, fihavanam-pirenena ihany no hahazoantsika mandravona izany rehetra izany”, hoy ny Filoha.
Tsy izay ihany fa tokony hatsaraina ny fomba fiasa ao anatin’ny rafitra fampihavanam-pirenena mba hahatonga izany hisy vokatra haingana kokoa. Nefa mila faharetana izany fa tsy vita indray andro, hoy hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina. “Fa io tsy vita indray andro, fa io ny rehetra no tsy maintsy miara-miaina izany fampihavanam-pirenena izany. Tsy tenenina fotsiny koa fa mila iainana, mila hampiharina ary tsy tokony ny Filoha irery no hanao izany fa ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ny mpanao pôlitika dia manana andraikitra amin’izany.”
Mahakasika ny raharaha Augustin Andriamananoro kosa indray dia nanambara i Rajaonarimampianina fa anjaran’ireo tompon’andraikitra amin’ny Fitsarana sy izay nanaraka ireny raharaha rehetra ireny ny momba izany fa fifantohana amin’ny fampandrosoana izao no imasoana. “Miresaka fampandrosoana ho an’ny vahoaka isika izao. Fampandrosoana eo amin’ny sehatra maro samihafa. Mifantoka amin’ny fampandrosoana isika amin’izao fotoana izao. Marina fa misy ny resaka maro samihafa, toa ny pôlitika, ny ataon’ny olom-pirenena fa avelako amin’ireo tompon’andraikitra ny Fitsarana izany raharaha izany. Fa isika mila mifantoka amin’ny fampandrosoana, ny olona rehetra no antsoiko eto satria tsy maintsy ao anatin’ny fampihavanam-pirenena no hampandrosoana ny firenena na dia eo aza ireo mihoa-pefy izay tsy mampiseho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fandraisana andraikitra entina hampandrosoana ny firenena”, hoy ny Filohan’ny repoblikan’i Madagasikara.